संसारकै खुसी र शान्त देश भुटान कसरी बन्यो ? यस्ता छन रहस्यहरु – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/संसारकै खुसी र शान्त देश भुटान कसरी बन्यो ? यस्ता छन रहस्यहरु
संसारकै खुसी र शान्त देश भुटान कसरी बन्यो ? यस्ता छन रहस्यहरु
1882minutes read
एजेन्सी- विश्वको प्रदुषित शहरको सूचीमा काठमाडौं पनि पर्छ । यस्तै विश्वका सबै भन्दा बढी प्रदुषित शहर भएको देशमा भारत पनि पर्छ । भारतका सात वटा शहर विश्वका धेरै प्रदुषित शहरमा पर्छन् । प्रदुषणका कारण विकसित मात्रै नभइ हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकले पनि समस्या भोगिरहेको छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान भने यो मामिलामा भने सम्पन्न देखिएको छ ।
विश्वमै प्रदुषण मुक्त देशको रुपमा भुटानले परिचय बनाएको छ । यो उपलब्धीमा सरकारी नीतिको जति योगदान छ त्यति नै भुटानको जनताको पनि । भुटानको प्राकृतिक शौन्दर्यलाई देखेर नै विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् ।
ग्रोस नेसनल ह्याप्पीनेस सेन्टर भुटानका प्रमुख डा. साँगडू क्षेत्री भन्छन्, ‘भुटानका जनता प्रकृतिलाई भगवान मान्छन् । यहाँका थुप्रै पुस्ताका मानिसहरु अहिले पनि एक साथ एकै घरमा प्रकृति प्रति चिन्ता र चासो राख्दै बस्ने गर्छन् ।’भुटानको जीडीपी भारतकोभन्दा कम छ । यद्यपि यहाँका मानिस प्रसन्न, खुशी, सन्तुष्टका साथ प्रकृतिलाई प्रेम गरेर बस्छन् । हरेक वर्ष जुन ५ मा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ । यही सन्दर्भमा भुटान विश्वको सबैभन्दा शान्त, स्वच्छ र खुशी देश कसरी बन्यो ? पाँच कारण बुझौँ ।
१. ७० प्रतिशत जंगल सुरक्षित
भुटानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जंगल हो । ७० प्रतिशत क्षेत्रमा जंगल रहेको भुटानलाई विश्वकै हरियालीले हराभरा देशको रुपमा चिनिन्छ । यसका साथै विश्वमा सबैभन्दा बढी अक्सिजन भएको देशको रुपमा भुटानले परिचय बनाएको छ । पर्वत, नदी, स्वच्छ पानी तथा हरियाली भुटानको विशेषता हो । यसै कारण भुटान प्रदुषणरहित देश बनेको छ ।
२. २० वर्षदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध
प्लास्टिकको प्रयोगमा भुटानले २० वर्ष अगाडि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् १९९९ मा यहाँ प्लास्टिकको कुनै पनि सामान प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अझै पनि नेपाल र अन्य थुप्रै देशहरुले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । तर भुटानले प्लास्टिकको नकारात्मक प्रभाव २० वर्ष अगाडि नै बुझेको देखिन्छ ।
३. धुमपानविरुद्धको कानून बनाउने पहिलो देश
भुटानमा धुमपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ । धुमपान विरुद्धको अभियानमा भुटानले गरेको लडाइ निक्कै पुरानो समयदेखि भएको पाइन्छ । सन् १७२९ मा धुमपानसम्बन्धी कानून बनाउने पहिलो देश भुटान भएको मानिन्छ । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा यहाँ धुमपानविरुद्धको अभियान सशक्त भएको थियो । सन् २००४ मा भने भुटानले देशभर धुमपान सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भुटानमा धुमपान सेवन गर्नु कानूनी हिसाबले सिँधै जेल सजाय हुने छ भने यस अभियोगमा जमानत मिल्ने छैन ।
४. हियाली वृद्धिको कीर्तिमान
वन, जंगलको हरियालीले भरिएको भुटानले यस कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सन् २०१५ मा सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा भुटानमा एक सय युवाको एक समूहले एक घण्टामा ४९ हजार ६ सय ७२ बिरुवा रोपेका थिए । सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको उक्त कार्यपछि गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा यो कीर्तिमान भुटानको नाममा छ । यस पटक पनि पछिल्लो कीर्तिमानलाई तोड्न दश हजार बिरुवा रोपिएका छन् । यस्तै २०१५ मा भुटानका राजा–रानीको पहिलो सन्तान राजकुमार ग्यालसेको जन्मदिनको उत्सव मनाउन हजारौँ मानिसहरुले एक लाख आठ हजार विरुवा रोपेका थिए ।
५. वातावरण दिवसको अवसरमा पैदल दिवस
भुटानले गएको वर्ष विश्व वातावरण दिवसलाई पैदल दिवसको रुपमा मनाउने पहल गरेको थियो । भुटानको यातायात विभाग रोयल भुटान पुलिसको निर्देशनअनुसार देशभरका शहरी क्षेत्रमा यातायात बन्द गरिएको थियो । आपतकालिन सेवाका सवारीसाधन बाहेक अन्यलाई भने उक्त दिन आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसो गर्नुको पछाडि उक्त दिन सबै मानिसहरु आफ्नो कामका लागि पैदल नै हिँडेर जाउँन् भन्ने हो । यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र शारीरिक अभ्यासले तन्दुरुस्ती ल्याउने छ ।
आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै, कहाँबाट हेर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्यकर्मीको संसार रुवाउने व्यथा : गर्भवती विदा नपाउँदा दुई जुम्ल्याहा सन्तान गुमाए
अ’च’म्म: सै’ता’नलाइ खु’सि पा’र्न आ’फ्नै श्री’मा’न को ब’लि दि’इन यी म’हि’लाले (भिडियो सहित)
युएईबाट १५१ जना स्वदेश फर्किए, कोरोना देखिएपछि ३ जनाको उडान रोकियो
वीर अस्पताल छिरेपछि शरीर नै स्यानिटाइजरयुक्त हुने (फोटोफिचर)